Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo la kulmay Wakiilka Cusub ee Canada u fadhiya Jamaica
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo la kulmay Wakiilka Cusub ee Canada u fadhiya Jamaica
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wakiilka Sare ee Kanada u fadhiya Jamaica iyo Wasiirka Dalxiiska Jamaica
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, wuxuu guddoonsiiyaa Wakiilka Sare ee Kanada ee dhowaan la magacaabay Jamaica, Mudane Emina Tudakovic, (eeg bidixda sawirka) iyadoo leh astaan ​​gaar ah oo mahadnaq ah.
Mudane Tudakovic ayaa la kulantay Hon. Wasiir Bartlett Xafiisyadiisa Cusub ee Kingston.
Waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee dhinacyada sida waxbarashada iyo tababarka.
Waxa kale oo miiska saarnaa suurtogalnimada in Canada ay iskaashi la samaysato Jamaica si ay u furto xarun dayax -gacmeed oo ah Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka.
Munaasabaddan ayaa ahayd mid uu maamuuskeeda Tudakovic ku maamuusay Wasiirka 11 -kii Ogosto, 2021, Xafiisyadiisa New Kingston.
Intii kulankoodu socday, waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee dhinacyada sida waxbarashada iyo tababarka. Waxa kale oo ay ka wada hadleen suurtogalnimada in Canada ay iskaashi la samayso Jamaica si ay u furto xarun dayax -gacmeed oo ah Xarunta Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka.
The Jamaica Wasaaradda Dalxiiska iyo hay'adaheeda ayaa ku jira hawl ay ku doonayaan inay ku horumariyaan kuna beddelaan wax soo saarka dalxiiska ee Jamaica, iyagoo hubinaya in faa'iidooyinka ka soo baxa qaybta dalxiiska loo kordhiyo dhammaan dadka reer Jamaica. Si taas loo gaaro waxay hirgelisay siyaasado iyo istiraatiijiyado siin doona dardar dheeraad ah dalxiiska oo ah mishiinka koritaanka dhaqaalaha Jamaican. Wasaaraddu waxay weli ka go'an tahay inay hubiso in waaxda dalxiisku ay kaalin buuxda ka geysato horumarinta dhaqaalaha Jamaica iyadoo la fiirinayo inay kasbato dakhli aad u weyn.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Jamaica.